I-Linux Kernel 5.1 ifika futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
I-Linux kernel 5.1 ifika futhi lezi yizindaba zayo
Ngemuva kwezinyanga ezimbili zokukhula, Linus Torvalds wethule ukukhishwa kwenguqulo entsha ye-Linux kernel 5.1, version engeza ukulungiswa nokuhambisana nezakhi ezintsha zehadiwe
phakathi izinguquko eziphawuleka kakhulu yale nguqulo entsha yeKernel ifaka phakathi isikhombimsebenzisi esisha se-io_uring se-I / O asynchronous, amandla wokusebenzisa ama-NVDIMM njenge-RAM kanye ukusekelwa kwememori ebonakalayo eyabiwe eNouveau.
1 Izinto ezintsha ezintsha zeLinux Kernel 5.1
1.1 Ukusebenziseka kahle nokuphepha
1.2 Izinsizakalo zememori nezesistimu.
Izinto ezintsha ezintsha zeLinux Kernel 5.1
Njengoba sishilo kule nguqulo entsha i-interface entsha isetshenziselwe i-asynchronous I / O io_uring, yikuphi Kubonakala ngokusekela ukuvota kwe-I / O kanye nekhono lokusebenza nakho kokubili i-buffer nangaphandle kwe-buffer.
Njengengxenye ye-io_uring API, onjiniyela bazamile ukususa amaphutha we-interface endala ye-aio.
Ngokuya ngokusebenza, io_uring isondele kakhulu ku-SPDK futhi ihamba phambili kakhulu kuneLibaian lapho isebenza ngokuvota kunikwe amandla.
Okwefayela Ama-Btrfs engeze ikhono lokulungisa ileveli yokuminyanisa ye-zstd algorithm, okungathathwa njengokuvumelana okuhle kakhulu phakathi kwe-lz4 esheshayo kepha engasebenzi kahle ne-xz ehamba kancane kepha ecindezelwe kahle.
Phakathi kokunye ukuthuthuka kuma-Btrfs, singabona ukungezwa kokuskena okuvilaphayo kwento engezansi yokwehlisa umthwalo nokuqaliswa kwe-ioctl entsha yokulawula ukunqanyulwa kwedivayisi;
Okunye okusha ukuthi yengezwe kwiLinux Kernel 5.1 ikhono lokuqalisa ohlelweni lwefayela etholakala kudivayisi yemephu yedivayisi ngaphandle kokusebenzisa ama-initramfs.
Ukuqala ngenguqulo yamanje ye-kernel, amadivayisi wemephu yedivayisi angasetshenziswa ngqo ngesikhathi senqubo yokuqalisa, ngokwesibonelo, njengokuhlukanisa ngohlelo lwefayela lempande.
I-EXT2 ingeza ukusekelwa kwekholi yohlelo lwe-statx ngokuqaliswa kwenguqulo esebenza kahle kakhulu futhi esebenzayo ye-stat (), ebuyisa imininingwane enwetshiwe mayelana nefayela, kufaka phakathi isikhathi sokudala ifayela namafulegi aqondene nohlelo
Okukhethwa kukho prctl () PR_SPEC_DISABLE_NOEXEC ingeziwe ukulawula ukwenziwa kokuqagela yemiyalo yenqubo ekhethiwe.
Inketho entsha izokwenza ikuvumela ukuthi ulawule ngokukhethekile ukuvikelwa ekubulaweni kokuqagela ngezinqubo ezingase zihlaselwe kusetshenziswa i-Specter attack
Imodyuli ye-SafeSetID ye-LSM isetshenzisiwe, evumela izinsizakalo zohlelo ukuphatha ngokuphepha abasebenzisi ngaphandle kwamalungelo akhulayo (CAP_SETUID) nangaphandle kokuthola amalungelo ezimpande.
Izinsizakalo zememori nezesistimu.
Uhlamvu lwe- I-Linux 5.1 ingeza ukuqaliswa okuphephile kokulethwa kwamathokheni, kucatshangelwa ukuthi kungenzeka ukusetshenziswa kwe-PID kabusha.
Kungezwe amandla okusebenzisa amadivayisi wememori aqhubekayo (imemori eqhubekayo, ngokwesibonelo i-NVDIMM) njenge-RAM.
Kuze kube manje, ku-kernel, amadivayisi anjalo asekelwa njengamadivayisi wesitoreji, kepha manje angasetshenziswa njenge-RAM eyengeziwe.
Olunye ushintsho olukhulu kule nguqulo entsha yi- engeza ukusekelwa kokuphathwa kwememori kumshayeli weNouveau, ivumela i-CPU ne-GPU ukuthi ifinyelele ezindaweni zememori ezabiwe ezivumelanisiwe.
Imemori ebonakalayo eyabiwe (i-SVM) isetshenziswa ngesisekelo sohlelo lokulawulwa kwememori, olukuvumela ukuthi usebenzise amadivayisi anamayunithi awo okuphatha imemori (ama-MMU) angafinyelela kwimemori eyinhloko.
Kubandakanya ngosizo lwe-HMM, Ingakwazi ukuhlela isikhala sekheli elihlangene phakathi kwe-GPU ne-CPU, lapho i-GPU ingafinyelela khona kwimemori eyinhloko yenqubo.
Umshayeli we-Intel DRM weSkylake GPU nokusha (Gen9 +) kufaka phakathi imodi yokuqala ezenzakalelayo ezenzakalelayo, esisusa izinguquko zemodi ezingadingekile ngesikhathi sokuqalisa. Izinkomba ezintsha zedivayisi ezisuselwa kuzakhiwo ezincane zeCoffelake ne-Ice Lake zingeziwe.
Ukuxhaswa kwe-GVT (GPU Virtualization) kungezelwe ama-Coffelake chips. Kuma-GPU abonakalayo, ukusekelwa kwe-VFIO EDID sekuqalisiwe.
Ekugcineni, ukusekelwa kwe-GPU Vega10 / 20 BACO kumshayeli we-amdgpu nakho kuqokonyisiwe. Amathuluzi okuphatha amandla weVega 10/20 namatafula wokulawula okupholile weVega 10 aqalisiwe
Le nguqulo entsha yeKernel inezinguquko eziningi nokusekelwa kwamanye amadivayisi. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngayo, ungaxhumana isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Linux kernel 5.1 ifika futhi lezi yizindaba zayo